Jowhar.com - Somali news Leader - News: Heyadda Islamic Releif iyo Ururka SSWC oo tababar u soo gebagebeeyey haween barakacayaal ah (sawirro)
December 10 2013 23:42:53
Heyadda Islamic Releif iyo Ururka SSWC oo tababar u soo gebagebeeyey haween barakacayaal ah (sawirro)
Tababar lagu baranayey xirfada Toliinka dharka noocyadiisa kala gedisan ayaa maanta loo soo gebagebeeyey illaa 30 haween ah oo laga kala keenay qaar ka mid ah xeryaha barakacayaasha magaalada Muqdisho.
Tababarkan oo socday muddo 20 cisho ah ayaa waxaa maalgeliyey heyadda Gargaarka Islaamka (Islamic Releif Organization), waxaana fuliyey ururka badbaadinta haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed ee SSWC.
Munaasabad lagu soo xirayey tababarkan oo maanta ka dhacday Muqdisho ayaa waxaa haweenka tababarka loo soo xiray lagu gudoonsiiyey qalabka loo adeegsado toliinka dharka sida harqaamada dunta iyo waxyaabo kale si ay ugu shaqeystaan.
Guddoomiyaha ururka Badbaadinta Haweenka iyo caruurta Soomaaliyeed ee SSWC Marwo Aamino Xaaji Cilmi oo munaasabadaas ka hadashay ayaa sheegtay in tababarkan uu yahay kii 3aad ee ay u qabtaan haweenka barakacayaasha ah, ujeedada laga lahaana ay tahay sidii xirfado shaqo loogu abuuri lahaa haweenka danyarta ah.
�Tirada guud ee haweenka sadexda jeer aan siiney tababaar noocan ama dhaaqaale ay ku ganacsadaan waa 90, kuwaasoo aan ka soo kala xulnay xeryaha barakacayaasha Muqdisho, qaarkood caruur agoom ah ayey heystaan, kuwo kalena qoysaskooda ayey u shaqeeyaan, waxaan siinay tababar ku saabsan sida wax loo tolo, gabar walba harqaan ayaa hor yaala weyna qaadaneysaa , si ay ugu shaqeystaan nolol maalmeedka reerahoodana uga soo saartaan� ayey intaa ku dartay Marwo Aamino Xaaji Cilmi.
Waxay intaa ku dartay in tababarkan ay iska kaashadeen heyadda Islamic Relief iyo Ururka SSWC, iyadoo xustay iney sii wadi doonaan tagaeerada haweenka iyo caruurta Soomaaliyed gaar ahaan kuwo noloshoodu ay liidato si ay faqriga baxaan, waxayna ugu baaqday qeybaha bulshada iney taageeraan haweenka iyo caruurta danyarta ah.
Munaasabadaas waxaa sidoo kale ka hadlay Jafed Amer oo ah madaxa mashaariicda Somalia ugu qaabilsan heyadda Islamic Relief oo sheegay iney ku faraxsan yihiin mashruucan ay tababarka iyo xirfada shaqo ugu abuureen haweenka danyarta ah qaarkood, isagoo xusay in heyadiisu ay wax badan ka qabatay dalka, ayna sii wadi doonto taageerida shacabka Soomaaliyeed.
Qaar ka mid ah haweenkii tababarka loo soo xiray, qalabka toliinkana loogu deeqay ayaa u mahad celiyey heyadda Islamic Relief iyo SSWC oo mashuuracan iska kaashaday, waxayna xuseen iney ku shaqeysan doonaan harqaamada la siiyey si ay nolosha qoysaskooda ugu deberaan.
Heyadda SSWC ayaa horey mashaariic kan oo kale ah ugu sameeyey haweenka Soomaliyeed gaar ahaan kuwa ku nool xeryaha barakacayaasha Muqdisho, iyagoo la kaashada heyaddaha samafalka ee dalka jooga iyo shirkadaha ganacsiga ee maxaliga ah
master on June 13 2013
0 Comments · 1798 Reads
jowhar.com3,155,175 unique visits